ज्याेति तिलाञ्जली काठमाडौं, १७ साउन
सन् २०३० सम्ममा स्तनपान गराउने नेपाली आमाको दर ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि स्तनपान गराउने आमाको संख्या भने घट्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार २०१६ मा नेपालमा स्तनपानको दर जम्मा ५५ प्रतिशत छ । जब कि, सन् २०११ मा यो संख्या ७० प्रतिशत थियो । प्रत्येक वर्ष १ देखि ७ अगस्टसम्म नेपाललगायत १७० राष्ट्रमा स्तनपान दिवस मनाइन्छ ।
दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरिन्छ, तामझामका साथ कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिन्छ तर ती योजना र कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकेको छैन । तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ वर्षमा १५ प्रतिशत स्तनपानको दर घटेको छ ।
पछिल्लो समय कार्यालयमा काम गर्ने आमाको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानु, कार्यस्थलमा स्तनपान गराउने कक्षको व्यवस्था नहुनु र बट्टाको दूधको प्रयोग बढ्दै जानुले स्तनपान गराउने आमाको संख्यामा कमी आएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
सामाजिक मान्यताले स्तनपानको दरमा कमी
परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा स्तनपान गराउनुअघि १० जनामध्ये तीनजना शिशुलाई घिउ, मह र चिनी चटाउने गरेको पाइएको छ । शल्यक्रिया गरेर जन्माइएका शिशुलाई भने आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने अन्य दूध खुवाइने गरेको पाइन्छ ।
बच्चा जन्मिएलगत्तै सामाजिक मूल्यमान्यताअनुसार घिउ, मह, चिनी खुवाउने प्रचलनका कारण पनि स्तनपानको दरमा असर गरिरहेको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी बताउँछन् ।
स्तनपान नभएकै कारण नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसार वृद्धि विकास नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । बालबालिकाहरूको उचाइ कम हुनु, कुपोषित हुनु र सुस्त हुनुमा पनि स्तनपान नगराउनुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्र शिशुलाई आमाको दूध खुवाउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव रहे पनि नेपालमा बच्चा जन्मेको १ घण्टामा स्तनपान गराउनेको संख्या जम्मा ५५ प्रतिशत छ भने ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशत छ ।
विश्व स्वास्थ्य संघको तथ्यांकअनुसार स्तनपानलाई सुधार गरिएमा वार्षिक रूपमा विश्वभर ८ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।
२०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ०–१ वर्षसम्मका ७९.६ प्रतिशत शिशुले स्तनपान गर्न पाएका छन् भने २ वर्ष देखि ३ वर्षसम्मका ७२.२ प्रतिशत र ४ देखि ५ वर्षसम्मका ४०.९ प्रतिशत बालबालिकाले स्तनपान गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, ६ देखि ८ वर्षसम्मका ६ प्रतिशत बालबालिकाले स्तनपान गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंको अवस्था दयनीय
एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने नेपाली आमा ५५ प्रतिशत रहेकोमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै स्तनपानको अवस्था दयनीय रहेका तथ्यांकले देखाएको छ । जम्मा ४१ प्रतिशतले मात्र जन्मेको एक घण्टामा दूध खुवाउने गरेको पाइएको छ ।
सहरीकरणले गर्दा बट्टाको दूध खुवाउने र आमाको स्वास्थ्य बिग्रन्छ भनी बच्चालाई धेरै समय स्तनपान नगराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । कामको दबाब नहुने महिलाले पनि आफ्ना बच्चालाई आवश्यक स्तनपान गराउँदैनन् ।
स्तनपान नगराउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा असर
अत्यधिक मात्रा बजारीया दूध खुवाउँदा आर्थिक भार बढ्नुको साथै आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । बट्टाको दूध खाँदा बालबालिकामा कुपोषण हुने, बालबालिका होचो हुने, तेजिलो दिमाग नहुनुजस्ता समस्या देखिने हेलन केलर इन्टरनेसनलका डा. अतुल उपाध्याय बताउँछन् । साथै आमा र बच्चाको ममतामा कमी आउने उनको तर्क छ ।
स्तनपान बालबालिकाको पहिलो खोप भएको बताउँदै डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘बच्चा जन्मेको १ घण्टाभित्रमा आमाको दूध अनिवार्य खुवाउनुपर्छ । जसले शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ ।’
स्तनपान नगराउँँदा खर्च कति ?
स्तनपान नगराई आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु खुवाउँदा विश्वमा वार्षिक ३ सय खर्ब खर्च हुने गरेको छ ।
महिलाको कार्यव्यस्तताले स्तनपानमा असर
पछिल्लो समय महिला घरबाहिरको काममा व्यस्त हुँदा आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउन नसकेको परिवार कल्याण महाशाखाका पोषणवैद्य केदार पराजुली बताउँछन् । बढी मात्रामा घरबाहिर काम गर्न जाने हुँदा पर्याप्त मात्रामा बालबालिकालाई स्तनपान गराउन नसकेका कारण स्तनपानको दर घट्दै गएको पराजुली बताउँछन् ।
‘सरकारले महिलालाई ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिँदै आए पनि पर्याप्त नभएको र निजी संस्थामा काम गर्नेको हकमा झनै सहज नभएको उनको भनाइ छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘बट्टाको दूध बजारमा आउनु र आमाले स्वास्थ्य बिग्रन्छ भनी भ्रममा परेर स्तनपान गराउन छोडेका छन्, यो सरासर गलत हो ।’
सरकारले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यससम्बन्धी ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ छ । तर, दूधको प्रतिस्थापमान बिक्री हुने गरेका बट्टाका दूध, पाउडर दूधलगायत भने अझैसम्म पनि प्रतिबन्धित हुन सकेका छैनन् । आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण बढिरहेकोले बच्चाको पोषण स्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
कार्यालय जाने आमाले के गर्ने ?
सामान्यतया घरबाहिर कार्यालयमा काम गर्न जाने आमाले बच्चालाई बट्टाको दूध खुवाउने प्रचलन छ । कार्यालय टाढा हुनु, कार्यालयमा स्तनपान कक्ष वा बेबी केयर सेन्टर नहुनुजस्ता कारणले नचाहेरै पनि बट्टाको दूध खुवाउँछन् । तर, आमाको दूध निकालेर बट्टामा राखी खुवाउनु उपयुक्त हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
आमाको दूध निकालेर सफा भाँडामा राख्दा ६ घण्टासम्म बच्चालाई खुवाउन हुने डा. उपाध्याय बताउँछन् । साथै आमाको दूध फ्रिजमा राख्दा तीन दिनसम्म बच्चालाई खुवाउन मिल्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको सन् २०११ को तथ्यांकलाई हेर्दा ६९.९ प्रतिशत आमाले स्तनपान गराएका थिए भने २०१६ मा आइपुग्दा यसको दर घटेको हो । सन् २०३० मा ९९ प्रतिशत स्तनपान गराउने लक्ष्य राखिएकोमा झन् घट्दै जानु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६, १४:४९:००